ထိုငျးဘဏျ အဲဒီအစားဘဏျမြားထကျ လူမှုဘဏျလုပျငနျး
ကနြျောတို့ထိုငျး 106 နှဈကဘဏျမြား၏ဘဏျကွောငျ့ထိုငျးနိုငျငံအားလုံး၌ညီအဈကိုတှဆေုံ့ရနျနိုငျသောဘဏ်ဍာရေးဝနျဆောငျမှုမြားကိုဖှံ့ဖွိုးဆဲဖို့သန်နိဋ်ဌာနျနဆေဲဖွဈသညျ။ ထိုငျးနှငျ့တဈလူမှုရေးနှငျ့ရဲ့ buddy ကိုဖနျတီးရနျအဆငျသငျ့။ တညျငွိမျသောအနာဂတျသာယာဝပွောနှငျ့ကွာရှညျခံပြျောရှငျမှုနှငျ့တိုငျးပွညျသညျလူမြားနှငျ့ပတျသကျပွီးဆောငျကွဉျးရနျ။ ယခု မှစ. ဘဏျမြားတနျဖိုးရှိသောဘဏ်ဍာရေးဝနျဆောငျမှုမြားကိုတီထှငျဆကျလကျပါလိမျ့မယျ။ အားလုံးဖောကျသညျအစိတျအပိုငျးမြားမှဘဏ်ဍာရေးပေး။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ဖောကျသညျမြား၏အမွငျ့ဆုံးစိတျကနြေပျမှုယူလာပါ။ ထိုအခါအမြားပွညျသူကဏ်ဍ, ပုဂ်ဂလိကကဏ်ဍနှငျ့လူထုအခွပွေုလူ့အဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့မြှဝဖေို့အဆငျသငျ့ရှိပါတယျ။ ဒဈဂဈြတယျစီးပှားရေးသို့ထိုငျးမောငျးနှငျရနျ, နှငျ့ထိုငျးနိုငျငံ 4.0 လြောကျပတျဘဏျ၏ဒုတိယရာစုသို့ရှဖေို့။ ဘဏျကြျောထိုငျးနိုငျငံဘဏျ .... ။ လူမှုဘဏျလုပျငနျး
နိုငျငံတကာငှလှေဲလုပျငနျး နိုငျငံခွားငှလှေဲခွငျးနှငျ့အပွညျပွညျဆိုငျရာငှလှေဲခွငျး ၀ နျဆောငျမှုမြားသညျအမရေိကနျဒျေါလာ (USD)၊ ယူရို (ယူရို)၊ ပေါငျစတာလငျ (GBP)၊ ဒိနျးမတျခရိုနာ (DKK)၊ နျောဝခေရိုနာ (NOK)၊ ဆှီဒငျ (SEK)၊ သွစတွေးလဒြျေါလာ (AUD) နှငျ့ဂပြနျယနျး (JPY)
နိုငျငံခွားငှကေိုမညျသို့လှဲပွောငျးရမညျနှငျ့ ပတျသကျ၍ အကွံဥာဏျ
အကြိုးခံစားသူ၏အကောငျ့သို့နိုငျငံခွားမှငှလှေဲခွငျး ၎င်းငျးသညျအစိုးရငှစေုဘဏျ၏ဘဏျခှဲတဈခုတှငျဘဏျတဈခုဖှငျ့လှဈထားသညျ ထိုငျးနိုငျငံရှိဘဏျခှဲအားလုံးတှငျငှလှေဲနိုငျသညျ ကမ်ဘာတဈဝှမျးရှိဘဏျမြားမှငှလှေဲနိုငျသညျ ၎င်းငျးသညျနိုငျငံတကာငှလှေဲ ၀ နျဆောငျမှုကိုပေးသညျ အစိုးရငှစေုဘဏျဖှငျ့လှဈလိုကျသောငှကွေေးဖွငျ့ငှလှေဲပွောငျးခွငျးဖွငျ့ထိုငျးဘတျသို့မပွောငျးရနျမူလဘဏျသို့အကွောငျးကွားပါ ဘယျငှကွေေး 8 ရှိပါတယျ
ငွေလွှဲခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများတွင် နိုင်ငံခြားဘဏ်များအား အောက်ပါအချက်များကို ကြိုတင်အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည် မည်သည့် GSB ဘဏ်ခွဲအကောင်ထံသို့မဆို နိုင်ငံခြားလွှဲငွေများကို တိုက်ရိုက် အပ်နှံ နိုင်ပါသည်
ငွေလွှဲမှုအတွက် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် ။ ။
လက်ခံမည့် ဘဏ်အမည် ။ ။ GSB အစိုးရငွေစုဘဏ်၊ ဘန်ကောက်မြို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ။
GSB ကုတ်နံပါတ် ။ ။ GSBATHBK
လက်ခံမည့် အကောင့်နံပါတ် ။ ။ (ငွေလက်ခံသူ၏ အကောင့် နံပါတ်) ....................
လက်ခံမည် နာမည် ။ ။ (ငွေလက်ခံသူ၏ အကောင့် နာမည်) ..................
ငွေလွှဲရသည့် အကြောင်း ။ ။ ....................
GSB ဘဏ်ခွဲအမည် ။ ။ ....................
** ကွောငျးကိုသငျ၏ဘဏျအကွောငျးကွားပေးပါမလုပျပါနှငျ့ထိုငျးဘတျငှေ (THB) ကို convert **
2.2 ပြည်ပသို့ ငွေလွှဲအပ်ခြင်း ၀န်ဆောင်မှု ၀န်ဆောင်မှုပုံစံ ။ ။ အစိုးရငွေစုဘဏ်မှ ဖွင့်လှစ်ထားသော ၀န်ဆောင်မှုအရေအတွက်နှင့် ငွေလွှဲမည့် အကြောင်းအရာများအပေါ် မူတည်၍ နိုင်ငံတကာငွေလွှဲခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်
၁။ အကယ်၍ ငွေလက်ခံမည့်သူသည် အခြားနိုင်ငံဖြစ်နေပါက ငွေလွှဲမှုတစ်ကြိမ်လျှင် ထိုင်းဘတ်ငွေ ၄၀၀ ကျသင့်ပါသည်။
၂။ အကယ်၍ ငွေလွှဲမည့်သူသည် အခြားနိုင်ငံသို့ လွှဲပါက သတ်မှတ်ထားသော ကျသင့်ငွေမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်သည်။
သြစတြေးလျဒေါ်လာ (AUD)၊ ဒိန်းမတ်ခရိုဏာ (DKK)၊ နော်ဝေခရိုဏာ (NOK)၊ ဆွီဒင်ခရိုဏာ (SEK)၊ စင်ကပူဒေါ်လာ (SGD)၊ ဆွစ်ဖရန့် (CHF)၊ သို့မဟုတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (USD) ကဲ့သို့ငွေောကးများလွှဲလျှင် ကျသင့်ငွေ ထိုင်းဘတ် ၄၀၀ အပြင် ၇၅၀ ဘတ် ထပ်မံပေးဆောင်ရမည်။ စုစုပေါင်း ၁၁၅၀ ဘတ် ကျသင့်ပါသည်။
ဂျပန်ယန်း (JPY) ကဲ့သို့ငွေကြေးများလွှဲလျှင် ကျသင့်ငွေ ထိုင်းဘတ် ၄၀၀ အပြင် စုစုပေါင်းလွှဲငွေ၏ ၀.၀၅% ပေးဆောင်ရမည်။ ကျသင့်ငွေသည် အနည်းဆုံး ထိုင်းဘတ်ငွေ ၁၆၀၀ မှစုစုပေါင်း ၂၀၀၀ ဘတ်မှစ၍ ကျသင့်နိုင်ပါသည်။
၃။ အကယ်၍ ငွေလွှဲမည့်သူသည် နိုင်ငံခြားသို့ ကျသင့်ငွေလွှဲခကို ပေးချေလျှင် လက်ခံသူသည် မည်သည့်ကျသင့်ငွေမျှ ထပ်မံပေးချေရန်မလိုပဲ လွှဲလိုက်သော ငွေအပြည့် ရရှိပါမည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ပြင်ပသို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့် လွှဲလျှင် ဘဏ်မှကျသင့်ငွေ ထိုင်းဘတ် ၄၀၀ အပြင် ဘတ် ၁၁၀၀ ကျသင့်ပါမည်။ စုစုပေါင်း ကျသင့်ငွေ ဘတ် ၁၅၀၀ ဖြစ်ပါမည်။
ယူရို (EUR) သို့မဟုတ် ဗြိတိသျှပေါင် (GBP)ဖြင့် လွှဲလျှင် ဘဏ်မှကျသင့်ငွေ ထိုင်းဘတ် ၄၀၀ အပြင် ဘတ် ၁၃၀၀ ကျသင့်ပါမည်။ စုစုပေါင်း ကျသင့်ငွေ ဘတ် ၁၇၀၀ ဖြစ်ပါမည်။
မှတ်ချက်။ ။ နိုင်ငံခြားဘဏ်များမှ ကျသင့်ငွေထပ်မံ ကောက်ခံလျှင် ထိုအတိုင်း ကျသင့်ပါမည်။
နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲ ၀န်ဆောင်မှု
နိုငျငံခွားမှငှလှေဲခွငျးလကျခံခွငျးအတှကျဝနျဆောငျမှုမြားပါဝငျသညျ နိုငျငံတကာငှလှေဲလုပျငနျး လကျရှိတှငျအစိုးရငှစေုဘဏျ အမွနျနိုငျငံတကာငှလှေဲ ၀ နျဆောငျမှုမြားအတှကျကိုယျစားလှယျဖွဈပါသညျ ငှသေားနှငျ့ဘဏျအကွှေးစာရငျးနှဈခုလုံး။ ယခုလကျရှိအစိုးရငှစေုဘဏျ ဝနျဆောငျမှုကိုယျစားလှယျ
အဆငျပွခွေငျးနှငျ့ဘေးကငျးလုံခွုံ အပွညျပွညျဆိုငျရာအမွနျငှလှေဲ ၀ နျဆောငျမှုမြားဖွဈသော MoneyGram, Ria Money Transfer, Xpress Money နှငျ့ SpeedSend တို့ကိုအစိုးရငှစေုဘဏျနှငျ့အတူ။
အစိုးရငှစေုဘဏျနှငျ့အပွညျပွညျဆိုငျရာအမွနျနှုနျးကိုလှဲပွောငျးလိုပါက၎င်းငျးသညျသငျ၏ငှအေတှကျအဆငျပွပွေီးလုံခွုံသော ၀ နျဆောငျမှုတဈခုဖွဈကွောငျးသငျစိတျခနြိုငျသညျ။ MoneyGram တညျနရော ၄၀၀,၀၀၀ ကြျော၊ Ria ငှလှေဲနရော ၃၅၀,၀၀၀ ကြျော၊ ၂၅၀,၀၀၀ ကြျော Xpress ငှကွေေးတညျနရောမြားနှငျ့ကမ်ဘာအနှံ့ရှိ SpeedSend နရော ၂၀၀၀၀ ကြျောတို့ဖွငျ့ရှိသညျ။ ပိုကျဆံခြှတော
ပိုကျဆံပို့ခွငျးအတှကျလြော့နညျးပေးဆောငျပါ။ MoneyGram ၏နိုငျငံတကာအမွနျငှလှေဲ ၀ နျဆောငျမှုကိုအစိုးရငှစေုဘဏျ၌ Ria Money Transfer, Xpress Money နှငျ့ SpeedSend ကိုအသုံးပွုသညျ နှငျ့မညျသညျ့အခကွေးငှနေုတျယူလိမျ့မညျမဟုတျပါ ငှသေားလကျခံရနျ
ငွေလွှဲပြီး မိနစ် ၂၀-၃၀ အတွင်း တစ်ဖက်သို့ လျှင်မြန်စွာ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ( ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများအပေါ်မူတည်၍ အချိန်ကွာခြားနိုင်ပါသည်)
တစ်ရက်အတွင်း ငွေလွှဲ ငွေထုတ် အများဆုံးလုပ်နိုင်သော ပမာဏ
GSB၏ MoneyGram, Ria Money Transfer နှင့် SpeedSend တို့ဖြင့် လူတစ်ဦးအတွက် တစ်ရက်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ သို့မဟုတ် ထိုင်းဘတ်ငွေ ၃၀၀၀၀၀ အထိ လွှဲအပ်နိုင်ပါသည်။
တစ်ရက်အတွင်း ငွေလွှဲ ငွေထုတ် အများဆုံးလုပ်နိုင်သော ပမာဏသည် လွှဲမည့် နိုင်ငံရှိ (သို့မဟုတ်) ထုတ်မည့်နိုင်ငံရှိ ၀န်ဆောင်မှုမှ သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည်။
Xpress Money ၏ တစ်ရက်အတွင်း ငွေလွှဲနိုင်သော ပမာဏမှာ လူတစ်ဦးအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ သို့မဟုတ် ထိုင်းဘတ်ငွေ ၁၅၀၀၀၀ အထိ ဖြစ်ပါသည်။
ငွေလက်ခံမည့်သူဘက်မှ ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ရန် မလိုအပ်ပါ။
လူတစ်ဦးမှ တစ်ဦးသို့ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုသာ ဖြစ်သည်။
ငွေလဲလှယ်နှုန်းနှင့် ၀န်ဆောင်ခသည် ၀န်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီမှ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားသို့ ငွေလွှဲသည့်အခါ လွှဲသူဘက်မှ ကျသင့်ငွေနှင့် လွှဲမည့်ငွေများ ပေးအပ်ပြီး လက်ခံသူဘက်မှ ငွေသားများကို (ငွေသားမှ ငွေသားသို့လွှဲအပ်ခြင်းအတွက်)မည်သည့်ကျသင့်ငွေမျှ ကောက်ခံခြင်းမရှိဘဲ လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပြီး (ငွေသားမှ အကောင့်ထဲသို့ လွှဲအပ်ခြင်းအတွက်) လွှဲလာသော ပမာဏအထဲမှ ကျသင့်ငွေ နုတ်ယူကာ အကောင့်ထဲသို့ လက်ခံရရှိမည် ဖြစ်သည်။
"Money Transfer" ဖောင်တွင် ငွေလွှဲမည့် နိုင်ငံနှင့် လွှဲမည့် ပမာဏ စသည့်အချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်းပါ။
အစိုးရအသိမှတ်ပြု သက်တမ်းကျန်ရှိသော သက်သေခံ အထောက်အထားဖော်ပြသည့် ကတ်ပြားများ (ပတ်စပို့၊ မှတ်ပုံတင်) နှင့်အတူ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘဏ်၏ စည်းကမ်းဥပဒေနှင့်အညီ ငွေလွှဲမည့် စာရွက်စာတမ်းများ၊ ကတ်ပြားများ တင်ပြပါ။
အစိုးရငွေစုဘဏ်မှ ငွေလွှဲရန် လုပ်ဆောင်ပြီး လက်ခံပြေစာ သို့မဟုတ် ငွေဖြတ်ကြောင်း သက်သေခံဖြတ်ပိုင်း ပေးပါမည်။
ငွေလွှဲသူသည် ပြေစာကို စစ်ဆေးပြီး လက်မှတ်ထိုးရပါမည်။ ထို့နောက် ငွေလွှဲနံပါတ် သို့မဟုတ် ငွေထုတ်ကုတ်နံပါတ်ပါရှိသော လက်ခံပြေစာကို ရရှိပါမည်။
"Receipt of Money" ဖောင်တွင် ငွေလွှဲနံပါတ် သို့မဟုတ် ငွေထုတ်ကုတ်နံပါတ် နှင့်အတူ လက်ခံမည့်ငွေပမာဏကို ဖြည့်သွင်းပါ။
အစိုးရ အသိမှတ်ပြု သက်တမ်းကျန်ရှိသော သက်သေခံ အထောက်အထားဖော်ပြသည့် ကတ်ပြားများ (ပတ်စပို့၊ မှတ်ပုံတင်) တင်ပြပါ။
The Government Savings Bank will check the accuracy of various information and issueareceipt or proof of transaction, the customers verify the authenticity and sign the receipt.
အစိုးရငွေစုဘဏ်မှ ငွေလက်ခံသူအား (ငွေသားတိုက်ရိုက်လက်ခံလျှင်) အခကြေးငွေ မနှုတ်ဘဲ လွှဲလာသော ငွေသားများ ပေးအပ်ပါမည်။
ရုံးခွဲကို ရှာရန် ဆုလက်ဆောင်များ အမေးအဖြေ မှတ်ပုံတင်ရန် Manual